Emeji Inobuditswa neemail Inogona Kutsigira Yako Kushambadzira Zvinangwa | Martech Zone
Maitiro Ekubuda Emega Kushambadzira Anogona Kutsigira Ako Ekushambadzira Zvinangwa
Chipiri, Kurume 13, 2018 Ian Cleary
Inbound marketing zvakanaka.
Iwe unogadzira zvemukati.
Iwe unotyaira traffic kune yako webhusaiti.
Iwe unoshandura imwe yeaya traffic uye wotengesa zvigadzirwa zvako uye masevhisi.
Ichokwadi ndechekuti zvakaoma kupfuura nakare kose kuwana peji rekutanga mhedzisiro yeGoogle uye kutyaira organic traffic.
Kugadzirwa kwehutano yave kukwikwidza zvine hukasha.
Organic kusvika pamasocial media chiteshi kuri kuenderera kudzikira.
Saka kana iwewewo waona kuti kushambadzira kuri mukati hakungokwani, uchafanira kuchipa iyo yekuwedzera Push kuti uwane mhedzisiro yauri kutevera.
Uye ndipo panobuda kushambadzira kweemail kunobuda.
Email Yakabuda Kunze
Kuburitswa kweemail kunobuda ndezvekusvika kune yakanyanya kunongedzwa runyorwa rwevanhu vanogona kubatsira nebhizinesi rako.
Haisi yako inotonhora inotumira tsamba paemail kwaunofuridzira iwo iwo meseji kune zviuru zvevanhu. Zvakanyanya kuomarara uye zvine hungwaru kupfuura izvo.
Nemaitiro chaiwo uye maturusi, email inotengeswa inogona kuve inoshanda kwazvo pakuwedzera kuoneka kwechiratidzo chako uye kugadzira zvinotungamira kune rako bhizinesi.
Uchishandisa chishandiso, senge OutreachPlus, iyo yakagadzirirwa chaizvo email yekusvikira ichakubvumidza iwe kutumira zvakanyanya zvakasarudzika maemail kune vashoma vateereri, kumisikidza yekutevera-kuteedzana, kuteedzera kutaurirana kwese netarisiro yako, kuyera mhedzisiro yemakampeni ako, uye zvimwe.
Iyo dashibhodhi inokupa yakakwira mwero kutarisisa kwekuita
Saina Kuti Uwane OutPlus 14 Mazuva Emahara Muedzo
Iye zvino, ngatitarisei mamwe emazano anonyanya kushanda aunogona kushandisa kushambadzira bhizinesi rako uchishandisa chishambadziro cheemail.
Gadzira zvinongedzo kuti uwedzere traffic.
Unganidzo yekuvaka mishandirapamwe inoshanda pamatanho maviri - ivo vanokubatsira iwe kuvaka akasiyana link mbiri iyo yakakosha zvakanyanya kune SEO, uye ivo vanounza yepamusoro mhando traffic kune yako webhusaiti.
Asi, kuti uwane izvi mabhenefiti iwe unofanirwa kutsvaga mikana inoenderana yekuvaka link kureva mvumo, nzvimbo dzakakwirira dzinoenderana zvakanyanya nemusoro wenyaya yako wozosvika pavari.
Kune akawanda ekubatanidza ekuvaka matekiniki, asi heano mashoma ayo anoshanda zvakanyanya mushe.
Complimentary zvinongedzo - Tsvaga zvinyorwa zvinyorwa pamasayiti ane hukama uye chinongedzo chekuchinjana.
Akaputsika zvinongedzo - Tsvaga zvakaputsika zvinongedzo pane epamusoro-masimba masosi uchishandisa chishandiso senge Ahrefs uye udza navo kuti vape chinotsiva chinongedzo.
Resource mapeji zvinongedzo - Tsvaga akakodzera masosi mapeji uye svikira kuti upe yemhando sosi iyo inowedzera kukosha uye inokwana zvakakwana nezvimwe zvese zviwanikwa pane iro peji.
Kubatanidza chivakwa kunogona kutora nguva, asi kwakakosha kwazvo, saka unofanirwa kurongeka neako wekusvikira.
Simbisa kusvikirwa kwezvako zvemukati zvemukati.
Email kufambiswa inzira yakasimbiswa, inoshanda kwazvo yekutyaira traffic uye kubatikana kweako zvemukati.
Iwe unogona kusvika kune vanokurudzira mune yako indasitiri, anoenderana mablog, kana kunyange vebhizinesi vadyidzani vane vateereri vanogona kufarira musoro wako. Chero bedzi zvirimo zvako zvichikosha zvakanyanya, kuchisimudzira kuburikidza nekushambadzira kuchawedzera kusvika kwayo uye kunogona kuunza mitsva mitsva kune rako bhizinesi.
Chero nzira, iwe unofanirwa kuve ne yakanaka yekusimudzira zano yezvako zvemukati.
Regedzera vanokurudzira kuvaka yako mhando.
Kufuridzira kushambadzira kunogona kushanda zvisingaite. Muchokwadi, mumwe mushumo wakawana izvo zve $ 1 yega yaunoshandisa mukushambadzira kwevanokurudzira unowana $ 6.50 kumashure.
Kutanga, iwe unozofanirwa kunyora runyorwa rwevanokurudzira vanoenderana niche yako uye mushandirapamwe urikumhanya, unokwanisa kutyaira vateereri vavo kuita chiito, uye inokodzera zita rako. Unogona nyore tsvaga vanokanganisa zvakanaka neBokaHigh.
Iwe unogona ipapo kurodha runyorwa rwako kune chishandiso chekushandisa uye wotanga kuvaka mushandirapamwe wako. Ingo ita chokwadi chekuita yako maemail kune yega yega inokurudzira mumwe nemumwe kuti uwedzere mikana yako yekuwana mhinduro.
Zvishandiso zvemaimeri zvinobuda zvakanakira kudzora nzira yekusvikira, asi zvakakosha pakuchengeta munwe wako pakufema kwehukama hwako nevanokurudzira sezvavanokura.
Wedzera kusvibiswa kuburikidza nekufambiswa kwenhau.
Kuparadzira midhiya inzira isingadhuri yekuunza kuratidzwa uye kuoneka mhando yako inoda kukura. Zvinotaurwa mune vane masimba midhiya masaiti zvinokupa iwe wechitatu-bato kutendeka uye kutyaira yakananga traffic kune yako webhusaiti.
Asi… Iwe unofanirwa kunanga vakwanisi vapepeti, mutapi venhau, uye mabloggi, vanhu vangazofarira nyaya yauri kukanda. Uye izvi zvinotidzosera kukukosha kwekuve nerinonyanya kutariswa runyorwa rwevanosangana.
Tarisa vanhu vakatofukidza nyaya dzakafanana asi ita shuwa kuti zvauri kukanda zvine kona inonakidza uye yakasarudzika.
Unogona kuvaka PR mushandirapamwe ku:
Simudzira chako chazvino chigadzirwa / chimiro / sevhisi
Tora zano renyaya
Chipo chekupa ruzivo rwezvinyorwa zvenguva yemberi
Sezvo vatapi venhau uye vapepeti vari vanhu vakabatikana zvakanyanya, iwe unenge uchitofanira kuve nemoyo murefu uye kutumira anoteedzera-emaemail.
Kuva nechombo chinokwanisa kushandura yekutevera maitiro uye kutanga maemail akasarudzika zvichienderana nezviito zvevanogashira inova nguva yakakura yekusevha. Uyezve, hauzombofa wakarasa maemail kana akakosha midhiya vanobatana.
Yekutengesa email inotengeswa (kureva email kufambiswa) inogona kutsigira yako inbound zano uye zvakanyanya kubatsira kune ako akazara ekushambadzira zvinangwa.
Kana iwe usati watove, iwo mana matekisiki atakataura nezvawo muchinyorwa chino ndiyo nzvimbo yakanaka yekutanga nehurongwa hwako hwekusvikira. Ingozvishongedzera nechishandiso chekushandisa kuti ushandise, kurerutsa, uye kumhanyisa-mhanyisa maitiro uye iwe unozogadzika!
Tags: email kusvikachemonikushambadzira kushambadziraemail yakabudakwemusicpluskusimudzira zano
Ian ndiye CEO we RazorSocial uye akatsaurira hupenyu hwake hwekushanda kuti akubatsire iwe kuona maturusi akanakisa uye tekinoroji yemagariro enhau. Ian anogara achitaura pazviitiko (kunyanya muUS), uye anonyorera mazhinji emazhinji epamusoro enhau enhau mablog.
Kupisa pane Kupisa: Kuzivisa Iyo Nyowani Yakavanzika Sauce Recipe yeKushambadzira paLinkedIn